झा ब्रोको लिगलिगे दौड | जुज्दाइका २ पैसे विचारहरुको सँगालो
झा ब्रोको लिगलिगे दौड
Posted on September 26, 2017 by jujumaan
झा ब्रोसँग मेरो लिनुदिनु केही छैन। उनका जे जति टुइटहरु रिट्विट भएर मेराअगाडि आउँदछन, तिनका भरमा मान्छे अलि हैन ज्यादै औडाहै हो भन्नी निष्कर्ष चैँ निकालेको छु।
हिजो उनको छोरीलाई कसैले भारतीय भनेछन भन्नेबारे चित्त दुखाएको पाएँ (हेर्नुस् तलको फोटो)। नेपालीलाई नेपाली नभनेर भारतीय भनिँदा चित्त दुख्ने पहाडे मात्र हैन तराईवासी पनि हुने रहेछन भन्ने बुझेँ। नत्र नाकाबन्दी…. भैगो त्यता नजाउँ, यो नकोट्ट्याउँ।
विज्ञानको विद्यार्थी भएको नाताले ब्रोको कथाका केही भागहरुले सोच्न बाध्या पारे। हुन त म फिजिसिष्ट हैन, तर पनि फिजिक्सका सामान्य घटनाक्रमहरु ‘यो सम्भव होला त?’ भनेर सोच्दछु यदाकदा। ब्रोको कथा पढेपछि त्यस्तै सोच फुरेकाले यसो १-२ हिसाबहरु नगरी खाएको नपच्ने देखेर यो लेखेँ।
( तलका हिसाबमा प्रयोग गरिएका अंक/तथ्यहरु गुगलमा सामान्य खोजीबाट पत्ता लगाएको हुँ। )
ती तीन सुट लगाएका ब्रोहरुलाई m भनौँ। झा ब्रोलाई j भनौँ।
गुगलले के भन्यो भने, आम मानिसहरुको औसत हिँडाइ ५ कि.मि. प्रतिघण्टा हुन्छ। m ब्रोहरु कहिले चाँडो, कहिले ढिला हिँडे होलान… र ती नानीलाई प्रश्न सोधेपछि ‘अब हामीलाई कसैले खोज्दै आए झेउ हुन्च, चाँडो हिडौँ’ भनेनन् होलान। यसर्थ, ब्रोहरुको गति (v) निम्नानुसार मानौँ:
vm =5km/h = 1.39 m/s ———- (1)
अब झा ब्रोको कथाबाट केही जानकारी उतारौँ:
दिया नानी कम्पाउन्ड भएको घरबाहिरको सडक/खुला ठाउँमा खेल्दा झा ब्रो बाथरुममा थिए।
नानीलाई m (जसलाई मुजी मेन भनेर बुझ्न नि सकिन्छ) ले प्रश्न सोधेपछि उनले बाबालाई भनिन्।
बाबा ब्रो ननुहाई मान्छे भेट्न दौडिए।
मेरो अनुमानमा दियाले सडकबाट माथि बाथरुममा पुग्दा शायद ३-४ मिनेट लगाइन्। अप्रत्याशित प्रश्न सोधिए/घटना घटेपछि हामी त अकमकिन्छौँ, दिया त बच्चै (मेरो अनुमान, किनभने खेलिरहेकी थिइन्) छिन होला। एकछिन अकमकिएर बाबा खोज्दा ३-४ मिनेट लाग्ला कि भन्छु म।
त्यसपछि घटेको कुरा राम्रोसँग भन्न २-३ मिनेट लगाइन्। झा ब्रोले पनि राम्रोसँग सुन्नु र बुझ्नुपर्‍यो, त्यसैले यति समय लाग्यो होला।
योबेला झा ब्रो बाथरुममा हग्स दिँदै थिए वा नुहाउँदै थिए। किनभने, दिया सडकमा हुँदा ब्रो बाथरुम छिरिसकेका तर नुहाउन बाँकी नै रहेकाले यत्रो समय लुगा फुकाल्न मात्र त लाएनन् होला भन्ने मेरो अनुमान रहेको छ। जे गर्दै भए पनि लुगा लगाएर, तल कम्पाउन्डबाहिरको सडकमा निस्कन घटीमा पनि ४-५ मिनेट लगाए भन्दा म गलत हुन्न होला। मतलब, m ले सडकमा प्रश्न सोधेबाट झा ब्रो सडकमा आइपुग्न ९-११ मिनेट लाग्यो होला। १० नै भनौँ।
यसको अर्थ यो हुन्छ कि ती ३ जनाले १० मिनेट (600 s) मा निम्नानुसारको दूरी तय गरे; माथि (1) बाट:
1.39 m/s x 600 = 834 m (८०० मिटर भनौँ, सजिलोको लागि) ———- (2)
झा ब्रोको कथा अगाडि बढ्दछ, जहाँ उनी भन्दछन: “… म वाथरुम ननहुाइ फेरि लुगा लागाएर ती तीन जना युवाहरुलाई खोज्न दौडौ । तिनीहरु थोरै अगाडि गएकृा हुँदा …”
यहाँ दौडेको कुरामा जोड दिन पर्ने हुन्छ।
गुगलबाट भेटिएको एक आर्टिकलले के भन्यो त भने दौडँदा औसत मान्छेहरुको औसत गति 10.5 km/h हुन्छ रे। मानिलिउँ ती केटाहरुलाई खोज्न दौडदा झा ब्रोको गति पनि यति नै थियो। यसर्थ:
vj = 10 km/h = 2.8 m/s ———- (3)
त्यसपछि, कुनै चलायमान वस्तुले तय गरेको दूरी पत्ता लगाउन मैले यो फर्मुला प्रयोग गरेँ:
d = vt ———- (4)
v = गति
t ‍= समय
अब (3) र (4) जोड्ने हो भने, झा ब्रोले तय गरेको दूरी यो हुन्छ:
dj = vjt
= 2.8 x t
र (1) र (4) जोड्ने हो भने ती ३ केटाहरुले तय गरेको दूरी यो हुन्छ:
dm = vmt
= 1.39 x t
ब्रोको कथाले के पनि भन्दछ भने ती युवक र ब्रोको जम्काभेट हुन्छ। मतलब, दुवैले घरको कम्पाउन्डबाट तय गरेको दूरी बराबर हुन्छ। त्यसैले,
dj = dm हुन्छ। मतलब:
2.8 x t = 1.39 x t
तर के बिर्सन हुन्न भने झा ब्रो कम्पाउन्डमा निस्कँदा, ती ३ ब्रोहरु लगभग ८०० मिटर पर पुगिसकेका छन; माथि (2) हेर्नुस्।
2.8 x t = 1.39 x t ‌+ 800
=> t = 571 s = 9.5 min
यसरी, झा ब्रोलाई ती केटाहरु भेट्टाउन साँढे नौ मिनेट लागेछ। स्मरण रहोस्, उनी साँढे नौ मिनेट भरि नै लगातार दौडिइरहेका थिए; नत्र थप समय लाग्दछ।
कति पर भेट्टाएछन त नि? भन्ने जिज्ञासा छ भने यसको लागि समय माथि (4) मा हालेर हेरौँ:
= 2.8 x 571
= 1599 m
अर्थात, आफ्नो घरको कम्पाउन्डबाट १.६ कि.मि. पर मात्र भेटेछन ती केटाहरुलाई।
अब “थोरै अगाडि” भेटेको कुरा त साँचो हो या झूठो, म के जानौँ र। हिसाबले चाहिँ गाह्रै-गाह्रै देखाउँदछ। तर सारा तराईको समस्या समाधान गर्न भिखारी जसरी विदेशी पैसो मागेर हिँड्ने लगभग एक्लै नै लागिपर्नुभएका झा ब्रो सुपर हिउमन हैनन् भनेर भन्न पनि त सकिएन नि।
(नोट: माथि नै भनेँ, तर दोहोर्‍याउन चाहन्छु: म फिजिसिष्ट हैन। खासमा यो समस्यामा इन्टिग्रल प्रयोग गर्नुपर्ने हो किनभने झा केटाहरु समाउन दौडदा केटाहरु पनि हिडिरहेका हुन्छन। चलायमान दूरी यसरी पत्ता लगाउँदा ठ्याक्कै चैँ मिल्दैन तर हाम्ले गफ ठोक्नलाई चैँ सालाखाला मज्जाले मिल्छ।)
← नागा बाबाको छाउपडी कानुन
Deciduous Strippers →
3 thoughts on “झा ब्रोको लिगलिगे दौड”
यो (र यस्तै कथाहरु) अहिले रोपिएको विरुवा हो हेर्नोस्। केही महिनापछि बढेर रुख बन्दछ अनि विदेशी पैसा फलाउँछ। नत्र साउथ इन्डियन फिल्मलाई टक्कर दिने कथा त्यसै दैनिक जीवनमा घट्दैन। 😀
नानीले हुलिया देखि उमेर सम्मन गेस गरिहोलिन भनेर पत्त्याउन सकिन्न। ति केटाहरुले नानीलाइ सोध्दा झा ब्रो टोइलेटमा हुनुहुन्थ्यो। उनीहरुलाई देख्नुभएन। उनीहरुलाई छोरीले मात्र देखिन। अब कुद्दै गएर भेट्नुभयो रे मानौ। चिन्नु चै कसरि भयो तिनीहरु उनै हुन् भनेर?
डेढ किलोकिटरमा कती वटा मोड अाए होलान् , कती दोबाटो चौबाटो अाए होलान् । काठमाण्डौँका गल्लीहरू तिनै हुन् । केटाहरूको हुलिया सुनेकै (वा भनौँ सुँघेकै) भरमा पत्ता लगाउने झा जी को खुबिलीटीको चर्चा पनी हुन पर्ने देखियो । 😉